crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> UNICEF: 2016 waa sanadkii ugu darnaa nolosha carruurta Syria. | HimiloNetwork
UNICEF: 2016 waa sanadkii ugu darnaa nolosha carruurta Syria.
Posted by: Zakariya in Wararka March 13, 2017	0 170 Views
Xalab (Himilonews) – Waxa ay aheyd subax kamid ah subaxyada bishii Janaayo. Majed oo 13 jir ah iyo saaxiibkii Cumar oo 11-jir ah oo kusii jeeda beerta lagu nasto oo u dhaw gurigooda oo ku yiillay bariga magalada Xalab.
Waxa ay aheyd labo isbuuc kadib markii ay bilaabatay xabad joojin la gaaray bishii December. Waxa uuna hakad ku yimid dagaalkii ka socday ALEPPO taas oo oggolaatay inay kulmaan carruur badan oo deris ahayd iyo saaxiibo is-waayay iyaga oo waddadoodii kusii socda waxa ay arkeen arrin ay layaabeen oo aheyd bir lagu aasay dhulka.
“Waxa ay u ekeyd birta cabitaanka; waxa aan ku cabbiray inay yihiin qarax; waxa aan u tuuray kor laakin wixii dhacay marnaba mafileyn,” sidaas waxaa yiri Maajed. “Waxa aan ka walwalayey Cumar mana garaneyn si aan u caawiyo.”
Dadkii ayaa usoo kala cararay meesha ay wax ka dhaceen si ay u helaan qof ay wax gaareen wax ayna heleen Cumar oo dhowr dhaawac qaba.
Majed saaxibkii Cumar lalama gaarin isbitaal waxa uuna ku dhintay taksiga gudihiisa shan daqiiqo kadib markii meesha uu ku dhaawacmay laga qaaday.
Majed iyo saaxibkii Cumar sheekadooda waxa lagu soo qoray bogga hore ee UNICEF.
Carruurta Syria ayaa u nugul dhibaatada tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda dalkaasi sanadkii 2011.
Kala xiriir; Farriin-danabeed: Calikaafi9@gmail.com.
Previous: Dhageyso: Xog la xiriirta xulashada abuurka iyo saameynta uu ku leeyahay tacbashada fiican.
Next: Lakulan: Ninka Jaceylkiisa awgeed baaskiil ugu socdaalay Aasiya ilaa Yurub
Lakulan: Macalinka Ardayda xisaabta ku jecleysiiya ciyaarta ama dheesha Hip-Hop-ka